Fampiofanana mpanao gazety nokarakaran’i UJIRT
sy fankalazana ny andron’ny andron’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra
Notanterahana tao amin’ny Kaominina ambanivohitry ny Andasibe izay ao amin’ny Distrikan’i Moramanga ny fampiofanana ny mpanao gazety sy fankalazana ny andron’ny 3 Mai izay andron’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety �Libert� de Presse� sy ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra �Libert� d’expression�. Marihina fa ireo mpanao gazety izay mivondrona ao anatin’ny UJIRT (Union Journalistes Inter-Regional de Toamasina) izay notarihan’ny Filohany dia Atoa Gilbert RAJOELISON no nanatontosa izany. Ka ny Asabotsy faha 2 Mai lasa teo ary dia natomboka tamin’ny fampiofanana izany, anisany navoitra tamin’izany ny ho fandraisan’andraikitr’ireo mpanao gazety izay ao anatin’ny UJIRT eo anatrehan’ny fifidianana Kaominaly na ny fifidianana ny ho ben’ny tanana izay hotanterahina eto amin’ny firenena. Noresahana tamin’izany ihany koa fa manana andraikitra lehibe ireo mpanao gazety eo amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana.
Nitohy ny alahady faha 3 Mai fampiofanana ka nifantoka tamin’ny fifandraisan’ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao sarimihetsika na Cin�matographie indray izay notarihan’Atoa Jos� ,izay efa manana traikefa eo amin’ny asa fanaovan-gazety sy ny momba izany. Voalazany tamin’izany fa toy ny rano sy ny vary ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao sarimihetsika, ka tsy tokony hifanary. Ohatra tamin’izany ny fanaovana ireny sarimihetsika ireny dia tsy maintsy mila �sc�nario� ka tsy misy afa-tsy ny mpanao gazety no mitantara sy manoratra izany.
Nitohy tamin’ny fankalazana ny andron’ny 3 Mai ny fampiofanana, ny tolak’andro, izay notronon’ny manam-pahefana isan-karazany dia ny lehiben’ny Distrikan’i Moramanga mivady, ny Filohalefitry ny Ben’ny Tananan’ny kaominina Ambanivohitr’i Andasibe ary ny Talen’ny EPP Andasibe, izay mpampiantrano rahateo. Tao ihany koa ny filohalefitry ny Holafitry ny mpanao gazety sy ny mpanolo-tsain’ny holafitry ny mpanao gazety aty Atsinana sy Analanjirofo dia Atoa Lucien RAZAFINIARIVO. Nisy ny famelabelarana sy ny fanazavana fohifohy izay nataon’Atoa STEEV, mpitan-tsoratra amin’ny UJIRT, mahakasika ny antony nahatonga ny fankalazana ny andron’ny 3 Mai �Journ�e Mondiale de la Libert� de Presse et de la Libert� d’expression�. Ary nofaranana tamin’ny fiarahana fiala-hetaheta ny fotoana ary nanome fotoana ny filohan’ny UJIRT amin’ny manaraka indray.
(103) Cyril B. : 05-05-2015 - 10:30